NLD – ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အန်အယ်ဒီအမတ်များ မေလတွင် လွှတ်တော်တက်မည် | MoeMaKa Burmese News & Media
(ဓာတ်ပုံ – ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာ၊ အင်တာနက်)
20 Responses to NLD – ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အန်အယ်ဒီအမတ်များ မေလတွင် လွှတ်တော်တက်မည်
Mon on April 30, 2012 at 12:29 pm
GREAT!!! Good news. It should be done like this as all the public relied on NLD by voting wholeheartedly and bravely through heaps of difficulties to see NLD attending Luttaw by representing them. Congratulations, Daw Su for deciding for the people and respecting people’s wish !!!
zaw on April 30, 2012 at 12:34 pm
Thanks AMAY SUU and NLD,
We know your love and kindness to us and all of Myanmar population.
We, all Myanmar population, and people of world believe and support AMAY SUU and NLD
always. ( GODS BLESS AMAY and NLD)
All the best AMay~~~~~~~~~
*U AYE on April 30, 2012 at 12:56 pm
WISE DECISION. BUT, KEEP ON AIM AND OBJECT. AND AWARE OF CUNNING THINGS AS THEY HABBITUALLY DONE.
kolay on April 30, 2012 at 1:16 pm
Now our country overcomes from crisis.
Aunty is so brave.
If necessary, she dares to make sharp decision!
She sees only country’s face.
Dear Aunty we people are always together with you!
Thu Htut on April 30, 2012 at 1:22 pm
“အလျှော့ပေးလိုက်တာလားလို့ မေးရင် ဟုတ်ပါတယ်။ အလျှော့ပေးလိုက်တာပါ။ ပြည်သူ့ဆန္ဒအတွက်ပါ”(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)
The most preferable character of Daw Su is her “Sincerity”,atrue blood of Bogyoke who never hesitate to confess on his responsibility, please see following blog :
“ဘုရင်ခံက သူကြီးကွပ်မျက်မှု အကြောင်းကို မေးမြန်းသောအခါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ရှောင်လွှဲဖုံးကွယ်ခြင်း အလျဉ်းမပြုဘဲ ယင်းအမှုအတွက် သူ့တွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု မဆိုင်းမတွ ပြောသည်။ ဣနြေ္ဒမပျက် တည်ငြိမ်စွာ ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရင်ခံပင် အံ့သြသွားသည်။ http://www.mingalarpar.org/2011/04/blog-post_17.html
NINE NINE on April 30, 2012 at 2:43 pm
We know you all have already risked many things for the public & nation.
My pure suggestion………you all never underestimate the present camouflaged gov & USDP.
More crooked than we can expect.
May you all bring good luck for the people of Burma.
မောင်တိုး on April 30, 2012 at 3:06 pm
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့သမီး ဗိုလ်ချုပ်လိုပဲ တိုင်းပြည် မျက်နှာကြည့်ပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်လိုက်နိုင်မှုအပေါ် များစွာ ကျေနပ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
တကယ်ကို သင့်မြတ်၊ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။
အလျှော့ပေးတာ၊ မပေးတာထက်.. ပြည်သူ့ဆန္ဒကို ရှေ့တန်းတင်တာဟာ အပြောနဲ့ အလုပ်ညီတဲ့ ဒီမိုကရေစီဆန်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။
အမေစု… အောင်မြင်ပါစေ။ NLD ကျန်းမာပါစေ…။ လက်ရှိအာဏာရ အဖွဲအစည်း အေးချမ်းပါစေ..
တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက် အဖက်ဖက်က ခေါင်းဆောင်တွေ တွဲလက်ညီညာစွာနဲ့ ကြိုးပမ်းကြမှာ မြင်ယောင်ပြီး အလွန်ပဲ ကျေနပ်ပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်…
tun on April 30, 2012 at 3:15 pm
We understand NLD interest , he is fighting for our people no matter how difficulties.
Maung Maung on April 30, 2012 at 3:48 pm
That great, I really hope that you can do it for our people and we are always with you.
waiyan on April 30, 2012 at 5:25 pm
အပိုတွေပြည်သူ့သဘောလုပ်နေ ဘန်ကီမွန်းစကားပြောမယ်ဆိုလို့တက်တာမသိခက်နေတာပဲ ဟဟ အမေစုက ရမလားစမ်းကြည့်တာမရတော့လည်း ဒုံး၇င်းပေါ့ … ဇတကယ်ရှိရင်မတက်ပဲနေကျပါဗျာ..
yeehtun on April 30, 2012 at 5:46 pm
we agree the decision to participate in HLUTTAW.
Mg Aung on April 30, 2012 at 6:03 pm
We will not do that . …..No No, we will do that .
We will do that. ……No No , we will never do that.
It is Daw Su and NLD ‘s style.
dawei on April 30, 2012 at 6:10 pm
ကျွန်တော် တို့ လူမျိုးတွေ လုပ်လုပ်တာ တိကျမှု မရှိဘူး
ဘယ်နေ အရာပဲ ကြည့်ကြည့် အိမ်ဆောက်တာတို့ လမ်းတံတား အရာရာမှာပဲ
စီမံ ခန့်ခွဲမှု ညံလို့ နိင်ငံတကာ နဲ့ ယှဉ်ရင် နောက် မှာ ကျန်ခဲ့ မှာ ဘဲ ၊
ကျွန်တော် သိရလောက်ကတော့ ဥပဒေ ဆိုတာခြံ စည်းရိုး တစ်ခုလို မြင်မိ တယ် ၊
ခြံစည်းရိုး မခိုင်မခံဘူး ဆိုရင် နွား တိုးရင်တော့ ပြိုလဲ မှာပဲ။ အမှန်ပြော ရ ရင် ငွေရှိတဲ့ သူ က
ထားဖို့ နေရာ မရှိလောက်အောင်ချမ်းသာကြတယ်၊ မရှိတဲ့ သူကြတော့ ထမင်း တစ်နပ် စားရဖို့ရေး
မလွယ် လှ ဘူးဗျာ….
ဦးသြဘာသ on April 30, 2012 at 6:29 pm
ွှ အမှန်တရားကို သိရှိသော လူသားဘုရားသည် အမှန်တရားကို မသိသေးသော တိရစ္ထာန်ဘီလူကြီး အာဠ၀က၏ အမိန့်အာဏာပေးသည့်အတိုင်း ထိုင် / ထ (၃) ကြိမ်တိုင် လုပ်ပြပြီး ဘီလူးကြီးကို ယဉ်ကျေး လိမ်မာစေခဲ့ပါသည်။ အန်အယ်လ်ဒီ၏ လိုက်လျောကျင့်နိုင်ခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီအတွက် ကောင်းသော သွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ngaba on May 1, 2012 at 1:09 am
အင်မတန်မှ သင့်လျှော်သော ချိန်ခါသင့် ဥပမာပါဘုရား..
Tun Aung Tun on April 30, 2012 at 7:15 pm
—- Good Morning ——— !!!!
—- Good NEWS —- Great ——– !!!!
—- Sein-Bay-Dar-Ma-Par-Yin-Ah-Hlu-Ma-Phyit —- Pyu-Tit-Pyu-Tit ——— !!!!
—- Without AmaySuu and Group—-,Hluttaw will be Lifeless/Worthless/Senseless/None-essence ——— !!!!
—- TunAungTun ————————————————————————————————————–
စစစ on April 30, 2012 at 11:19 pm
စစ်အစိုးရ၊ယခုအစိုးရ၊လိုချင်တဲ့၊ဥပဒေကို ဘယ်တော့မှ၊ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ ရမှာ၊မဟုတ်ဘူး၊သူတို့လိုချင်တဲ့ဥပဒေ အတည်ပြုဖြစ်သွားပြီးရင်၊တပ်မတော်လွှတ်တော်ကိုယ်စလှယ်ဆိုတာလဲ၊ရှိမှာ၊မဟုတ်တော့ဘူး။ဒူးမထောက်ဘူးလို့ပြောတဲ့NLD လဲ ဒူးထောက်လာပြီ။နိုင်ငံတကာ စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့တာလဲပွင့်ဖွင့်ကုန်ပြီ။NLD ကို လိုက်လျှော့စရာမလိုတော့ဘူး။ NLD က ဥပဒေကို တခုမှ မပြင်နိုင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ ပြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာလဲ။ ၇၅ ကျော်မှ။ ကြံ့ဖွံ့နဲ့တပ်မတော်မဟုတ်တဲ့၊တခြားပါတီတွေ၊စုပေါင်းလာရင်တောင်၊ကြံ့ဖွံ့ နဲ့တပ်မတော် မနိုင်အောင်ဆိုပြီး၊၄၀ မကျော်ခိုင်းတာ။စစ်အစိုးရ အမြတ်ရသွားပြီ။
ဘောကြီး on May 1, 2012 at 1:07 am
ိနိင်ငံရေးမှာ ရပ်တည်ချက် ရည်ရွယ်ချက်မှားခဲ့ပြီးဆိုရင် အဲဒါနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူး သကြံန်အမြောက်ပဲ ကိုယ့်နိုင်ငံရေးခံယူချက်ကိုယ့်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တောင် ခိုင်မာအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး အာပြောနေတယ် ဆိုရင် ကျနော်ထင်ပါတယ် လွတ်တော်အထဲကိုဝင်သွားတော့မယ်ဆိုရင် ထမိန်းများ ပုဆိုးများချွတ်ပြီးဝင်ပါ လို့အကြံပြုချင်ပါတယ် ဒါမှမဟုတ် လွတ်တော်ကပြန်ထွက်လာရင် ထမိန်များပုဆိုးများ ပြန်ပါမ လားတော့ မှာကိုလဲ မြင်နေမိပါတယ်
zaw on May 1, 2012 at 12:42 pm
Every body should know QUANTITY and QUALIFICATION. And must read about
Democracy political system. ( Some comments are funny, look back yourselves)
Mon on May 1, 2012 at 8:21 pm
Agree with Zaw !! Look!!! This is supposed to beademocratic political system in which all the opposite people should sit up at the table and discuss or fight for doing or taking actions for the right things and right outcomes for the people. That’s why Daw Su is going there and for which we are happy….Inademocratic political system, you can’t avoid people who got different views, but just try to negotiate….